ပန်းတွေကို ကြာရှည်လတ်ဆတ်နေစေဖို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း(၇)ခု » Lifestyle Myanmar
HomeGeneral Knowledgeပန်းတွေကို ကြာရှည်လတ်ဆတ်နေစေဖို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း(၇)ခု
ပန်းတွေကို ကြာရှည်လတ်ဆတ်နေစေဖို့ ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း(၇)ခု
Posted in General KnowledgeLifestyle
အိမ်မှာ ဘုရားပန်းအိုး၊ အလှပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ရာသီဥတုပူတာကြောင့် ပန်းတွေကကြာရှည်မခံပဲ ညှိုးသွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေများတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ကြာရှည်လတ်ဆတ်စေမယ့် ပန်းထိုးနည်းလေးကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
၁။အ၀ကျယ်ပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ အိုးအလွတ်ထဲမှာ ပန်းပွင့်ကိုထည့်ပါ။
အမြဲတမ်းသန့်ရှင်းတဲ့ အိုးကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီနည်းလမ်းက ဘက်တီးရီးယားနှင့် တခြားသေးငယ်တဲ့ ဇီဝသက်ရှိတွေ ပန်းပွင့်ကို ပွားများကူးစက်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ပန်းတွေမကျပ်ညှပ်စေဖို့ ကျယ်ပြန့်ပြီး အ၀ကျယ်တဲ့ ပန်းအိုးကိုရွေးချယ်ပါ။
၂။ ရေပူထဲမှာ ပန်းပွင့်တွေကိုထည့်ပါ
ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေမဟုတ်ပါဘူး။ အပူချိန် ၄၃-၄၄ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ၀န်းကျင်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်နဲ့အတူ ပန်းအိုးထဲသို့ ရေလောင်းပြီး တစ်နာရီသို့မဟုတ် နှစ်နာရီ အေးမြတဲ့ နေရာမှာထားပါ။လေကအေးတာကြောင့် ပန်းပွင့်များက အစိုဓါတ်အနည်းငယ်ဆုံးရှုံးသွားစဉ်မှာ ရေပူမော်လီကျူးက ပင်စည်တစ်လျောက် လျင်မြန်စွာရွေ့လျားပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖြတ်ထားတဲ့ ပန်းပွင့်ကို ကြာရှည်ခံစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
၃။ အောက်ဖက်ရောက်နေတဲ့ အရွက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါ။
ဖြတ်ထားတဲ့ပန်းတွေကို ကြာရှည်လတ်ဆတ်စေဖို့ ထည့်ထားတဲ့ရေနဲ့ အရွက်တွေကို မထိအောင် ပန်းအရိုးတံအောက်ပိုင်းကအရွက်တွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ရေထဲမှာ နှစ်မြှပ်နေတဲ့ ပန်းရဲ့ အရွက်တွေက အလွန်လျင်မြန်စွာ ပုပ်တာကြောင့် ပန်းကတာရှည်မခံပါဘူး။
ပန်းတွေကို တာရှည်ခံဖို့ဆို နေတိုင်းရေလဲပေးပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ရေကို မထည့်ခင် ပန်းအိုးထဲက မကောင်းတဲ့ အပျက်အစီးတွေကို ဖယ်ရှားဖို့မမေ့ပါနဲ့ ။ဒါက ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ ပန်းပွင့်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားများကင်းဖို့ နှင့် ရေသန့်ရှင်းစေဖို့ ရေဖြည့်တဲ့အခါ (Aspirin) အက်စပရင်ဆေးပြားအနည်းငယ်ကို ထည့်နိုင်ပါတယ်။
၅။ ပန်းရိုးတံကို ၄၅ဒီဂရီ ညှပ်ပေးပါ။
ရိုးတံအစွန်းတွေကိုပုံမှန်ညှပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ချွန်ထက်တဲ့ဓါးကိုသုံးပါ။ ၄၅ဒီဂရီ စောင်းစောင်းလေးဖြတ်ပေးပါ။ ပန်းပွင့်ကရေကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်စေတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၆။အသီးတွေ၊ အပူနဲ့ နေရောင်တိုက်ရိုက်ကျတဲ့ နေရာတွေကိုရှောင်ပါ
နေရောင်နဲ့ အပူတိုက်ရိုက်မကျရောက်နိုင်ိတဲ့နေရာတွေမှာ သင့်ပန်းတွေကိုထားပါ။ အသီးတွေထည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်တစ်ခုနားမှာ ဖြတ်ထားတဲ့ပန်းတွေကို ထားခြင်းကလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ဒါက အီသိန်းပမာဏအနည်းငယ်ကို ထုတ်လွှတ်တာကြောင့် ပန်းပွင့်ကို အလျှင်အမြန်ပျက်စီးစေလို့ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
၇။ ညှိုးတဲ့ပန်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါ
သင်သတိထားမိတဲ့အခါတိုင်း ပန်းအိုးထဲက ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ ပန်းပွင့်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါ။ အသီးတွေလိုပဲ ညှိုးနေတဲ့ ပန်းတွေက အီသိန်းဓါတ်ငွေ့ကို ထုတ်လွှတ်တာကြောင့် လတ်ဆတ်တဲ့ ပန်းပွင့်တွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ပန်းတစ်ချို့ ညှိုးနွမ်းဖို့စတင်နေလျှင် အနည်းငယ်နွေးတဲ့ရေထဲမှာ ခဏစိမ်ထားပါ။
ပနျးတှကေို ကွာရှညျလတျဆတျနစေဖေို့ ထိနျးသိမျးနိုငျတဲ့ နညျးလမျး(၇)ခု
အိမျမှာ ဘုရားပနျးအိုး၊ အလှပနျးအိုးထိုးတဲ့အခါ ရာသီဥတုပူတာကွောငျ့ ပနျးတှကေကွာရှညျမခံပဲ ညှိုးသှားတတျပါတယျ။ အလုပျတှမြေားတဲ့ အိမျရှငျမတှအေတှကျ ကွာရှညျလတျဆတျစမေယျ့ ပနျးထိုးနညျးလေးကို အကွံပွုလိုကျပါတယျ။
၁။အဝကယျြပွီး သနျ့ရှငျးတဲ့ အိုးအလှတျထဲမှာ ပနျးပှငျ့ကိုထညျ့ပါ။
အမွဲတမျးသနျ့ရှငျးတဲ့ အိုးကိုအသုံးပွုပါ။ ဒီနညျးလမျးက ဘကျတီးရီးယားနှငျ့ တခွားသေးငယျတဲ့ ဇီဝသကျရှိတှေ ပနျးပှငျ့ကို ပှားမြားကူးစကျခွငျးရဲ့ အန်တရာယျကို လြှော့ခပြါလိမျ့မယျ။ ပနျးတှမေကပျြညှပျစဖေို့ ကယျြပွနျ့ပွီး အဝကယျြတဲ့ ပနျးအိုးကိုရှေးခယျြပါ။
၂။ ရပေူထဲမှာ ပနျးပှငျ့တှကေိုထညျ့ပါ
ပှကျပှကျဆူနတေဲ့ ရမေဟုတျပါဘူး။ အပူခြိနျ ၄၃-၄၄ဒီဂရီစငျတီဂရိတျ ၀နျးကငျြဖွဈသငျ့ပါတယျ။ ပနျးပှငျ့နဲ့အတူ ပနျးအိုးထဲသို့ ရလေောငျးပွီး တဈနာရီသို့မဟုတျ နှဈနာရီ အေးမွတဲ့ နရောမှာထားပါ။လကေအေးတာကွောငျ့ ပနျးပှငျ့မြားက အစိုဓါတျအနညျးငယျဆုံးရှုံးသှားစဉျမှာ ရပေူမျောလီကြူးက ပငျစညျတဈလြောကျ လငျြမွနျစှာရှလြေ့ားပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးက လတျလတျဆတျဆတျဖွတျထားတဲ့ ပနျးပှငျ့ကို ကွာရှညျခံစဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။
၃။ အောကျဖကျရောကျနတေဲ့ အရှကျတှကေို ဖယျရှားပေးပါ။
ဖွတျထားတဲ့ပနျးတှကေို ကွာရှညျလတျဆတျစဖေို့ ထညျ့ထားတဲ့ရနေဲ့ အရှကျတှကေို မထိအောငျ ပနျးအရိုးတံအောကျပိုငျးကအရှကျတှကေို ဖယျရှားလိုကျပါ။ ရထေဲမှာ နှဈမွှပျနတေဲ့ ပနျးရဲ့ အရှကျတှကေ အလှနျလငျြမွနျစှာ ပုပျတာကွောငျ့ ပနျးကတာရှညျမခံပါဘူး။
ပနျးတှကေို တာရှညျခံဖို့ဆို နတေိုငျးရလေဲပေးပါ။ လတျဆတျတဲ့ရကေို မထညျ့ခငျ ပနျးအိုးထဲက မကောငျးတဲ့ အပကျြအစီးတှကေို ဖယျရှားဖို့မမပေ့ါနဲ့ ။ဒါက ရောဂါကူးစကျမှုအန်တရာယျကို လြှော့ခပြါလိမျ့မယျ။ ပနျးပှငျ့ကို ထိခိုကျစတေဲ့ ဘကျတီးရီးယားမြားကငျးဖို့ နှငျ့ ရသေနျ့ရှငျးစဖေို့ ရဖွေညျ့တဲ့အခါ (Aspirin) အကျစပရငျဆေးပွားအနညျးငယျကို ထညျ့နျိုငျပါတယျ။
၅။ ပနျးရိုးတံကို ၄၅ဒီဂရီ ညှပျပေးပါ။
ရိုးတံအစှနျးတှကေိုပုံမှနျညှပျဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ ခြှနျထကျတဲ့ဓါးကိုသုံးပါ။ ၄၅ဒီဂရီ စောငျးစောငျးလေးဖွတျပေးပါ။ ပနျးပှငျ့ကရကေို စုပျယူနိုငျစှမျးကို တိုးမွှငျ့စတေဲ့ ရိုးရှငျးတဲ့နညျးလမျးဖွဈပါတယျ။
၆။အသီးတှေ၊ အပူနဲ့ နရေောငျတိုကျရိုကျကတြဲ့ နရောတှကေိုရှောငျပါ
နရေောငျနဲ့ အပူတိုကျရိုကျမကရြောကျနိုငျိတဲ့နရောတှမှော သငျ့ပနျးတှကေိုထားပါ။ အသီးတှထေညျ့ထားတဲ့ ပနျးကနျတဈခုနားမှာ ဖွတျထားတဲ့ပနျးတှကေို ထားခွငျးကလညျး ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။ ဒါက အီသိနျးပမာဏအနညျးငယျကို ထုတျလှတျတာကွောငျ့ ပနျးပှငျ့ကို အလြှငျအမွနျပကျြစီးစလေို့ ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။
၇။ ညှိုးတဲ့ပနျးတှကေို ဖယျရှားပေးပါ
သငျသတိထားမိတဲ့အခါတိုငျး ပနျးအိုးထဲက ညှိုးနှမျးနတေဲ့ ပနျးပှငျ့တှကေို ဖယျရှားပေးပါ။ အသီးတှလေိုပဲ ညှိုးနတေဲ့ ပနျးတှကေ အီသိနျးဓါတျငှကေို့ ထုတျလှတျတာကွောငျ့ လတျဆတျတဲ့ ပနျးပှငျ့တှကေို ပကျြစီးစပေါတယျ။ ပနျးတဈခြို့ ညှိုးနှမျးဖို့စတငျနလြှေငျ အနညျးငယျနှေးတဲ့ရထေဲမှာ ခဏစိမျထားပါ။
ဆေးထိုးဆေးမလိမ်းဘဲ သဘာဝအတိုင်း ရင်သားကိတ်ချင်တဲ့ မမတွေအတွက် လေ့ကျင့်ခန်း
သင့်အတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမယ့် ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ဘာကြောင့် ဝေးဝေးမှာနေသင့်တာလဲ
General KnowledgeUnique Things
ဝက်စ်ဟမ်း ၀ – ၄ လီဗာပူး၊ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် ၄ – ၀ ဟားလ...
မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ အချိန်ကုန်သက်သာမယ့် အလွယ်နည်းလမ်းလေးတွ
LifestyleMyanmar.com is leading website of Myanmar to bringing knowledge and daily updated international news for youth.
ဆေးထိုးဆေးမလိမ်းဘဲ သဘာဝအတိုင်း ရင်သားကိတ်ချင်တဲ့ မ...
သင့်အတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမယ့် ဆွေမျိုးတွေနဲ့ ဘာေ...
စိတ်ဖိစီးမှုကို သဘာဝအတိုင်း ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲနိုင်မယ...
Copyright © 2015 Myanmar Today Bago Disable responsivity